Public Health Concern प्लाज्मा थेरापी के हो ? कसरी उपचार गरिन्छ ? – Public Health Concern
प्लाज्मा थेरापी के हो ?
प्लाज्मा भनेको रगतको अंश हो । रगतमा रहेका सेता, राता रक्तकोष, प्लेटलेस छुट्ट्याएर बाँकी रहेको चिप्लो तरल पदार्थमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ । त्यसको प्रयोगबाट गरिने उपचार विधि प्लाज्मा थेरापी हो ।
कोरोना संक्रमणमुक्त भएको कति दिनमा प्लाज्मा दिन मिल्छ ?
नेगेटिभ नतिजा आएको १४ दिनपछि मात्रै प्लाज्मा निकाल्न मिल्छ । यो अवधिलाई कन्भलसेन्ट भनिन्छ । त्यति बेला नयाँ खालको भाइरस चिनेको एन्टीबडी तयार भएको हुन्छ । यो समय जति बढ्दै गयो एन्टीबडी उति निष्क्रिय हँुदै जान्छ ।
कतिदेखि कति वर्षसम्मका व्यक्तिले दिने हो ?
रक्तदान गर्न उपयुक्त व्यक्तिले नै प्लाज्मा दान गर्ने हो । १८६० वर्ष उमेर र ५० किलोभन्दा बढी तौल भएको स्वस्थ व्यक्तिले तीनतीन महिनाको अन्तरमा रगत दान गर्न सक्छन् ।
रक्त समूह मिल्नुपर्छ कि पर्दैन ?
रक्त समूह मिल्नुपर्छ । रक्त समूह मिले मात्रै प्लाज्मा दिन मिल्छ ।
प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार पाएका व्यक्तिले प्लाज्मा दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
कोरोना लागेर निको भएका जोसुकैले प्लाज्मा दिन मिल्छ ।
कसरी झिकिन्छ प्लाज्मा ?
रक्तदान गरेपछिको रगतलाई प्रोसेसिङ गरी मेसिनको सहायतामा प्लाज्मा निकालिन्छ ।
एक व्यक्तिबाट अर्कामा दिँदा तुरुन्त झिक्नुपर्छ कि पहिल्यै निकालेर सञ्चय गरिन्छ ?
यो पहिल्यै निकालेर राख्न सकिन्छ । यसलाई २० डिग्री तापक्रममा ६ महिना, ४० डिग्री तापक्रममा राखे १ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
के ब्लड बैंकजस्तै यसको कुनै बैंक हुन्छ ?
प्लाज्मा बैंक हुन्छ । अहिले ब्लड बैंकहरूमै प्लाज्मा भण्डारण गर्ने गरिएको छ । प्लाज्मा बैंक बनाउँदा अन्य रोगको उपचारमा पनि सहज हुन्छ ।
एक व्यक्तिबाट कति प्लाज्मा झिकिन्छ ? त्यसले कति जनालाई उपचार गर्न पुग्छ ?
एक व्यक्तिबाट ३ सय ३० मिलिलिटर रगत निकालिन्छ । त्यसबाट २ सय मिलिलिटर प्लाज्मा निस्किन्छ । एक पोका रगतको प्लाज्मा एक व्यक्तिलाई मात्रै प्रयोग हुन्छ ।
प्लाज्मा झिकिएको व्यक्तिको शरीरमा एन्टीबडी घट्छ कि घट्दैन ?
एन्टीबडी घट्दैन । स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा ५६ लिटर रगत हुन्छ, जसबाट ३ सय ३० मिलिलिटर मात्रै रगत निकाल्ने हो । ५६ लिटर रगतमा ५५ प्रतिशत प्लाज्मा हुन्छ । एकपटकको रगतदानमा निकै कम प्लाज्मा निकालिन्छ ।
प्लाज्मा निकाल्न कति समय लाग्छ ?
शरीरबाट रगत निकालेपछि ३०४५ मिनेटमा प्लाज्मा तयार हुन्छ ।
रगत निकालेपछि आराम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
रक्तदान गरेजस्तै हो । खासै शरीरमा फरक पर्दैन ।
प्लाज्मा थेरापी बिरामी कस्तो अवस्थामा पुगेपछि गरिन्छ ?
कोरोनाको गम्भीर लक्षण भएका, निमोनिया देखिएका, अक्सिजन चढाउँदा पनि अक्सिजनको मात्रा ९२ भन्दा कम भए प्लाज्मा थेरापी गरिन्छ ।
यो उपचार कति प्रभावकारी हुन्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा यसको नतिजा अझै भनिसक्ने स्थिति छैन । यद्यपि भेन्टिलेटरमै जानुपर्ने अवस्थाका, ८९ दिन भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामी पनि निको भएका छन् । विश्वमा यसलाई प्रभावकारी मानिएको छ ।
यसले अरू असर गर्छ कि गर्दैन ?
असर गर्दैन नै भन्ने छैन । प्लाज्मा थेरापीका जटिलता भने छन् । बिरामीको फोक्सोमा समस्या भएकाले थप समस्या पर्न सक्ने जोखिम हुन सक्छ । यो सम्भावना निकै कम छ ।